ဘဝမှတ်တိုင်: Speed Up And Optimize Your PC (All in one PC Suite !) ကွန်ပျူတာရှိသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software !!!
Speed Up And Optimize Your PC (All in one PC Suite !) ကွန်ပျူတာရှိသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software !!!
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) လေးကို အစဉ်တစိုက် အားပေးလာကြတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ Happy New Year ပါ... နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ၍ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်...။
နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင်အဖြစ် အမှန်အကန် အလန်းစား အမိုက်စား Software လေးတစ်ခုကို အားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေးပေးလိုက်ပါတယ်... :)
ဒီဆော့ဖ်ဝဲ လေးကတော့ အရမ်းကို လန်းတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ လေးပါ .. PC မှာ တခြား Software တွေ သုံးစရာမလိုတော့လောက်အောင်ပါပဲ... ကွန်ပျူတာရှိသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software လေးပါ.. Size လေးကလည်း 5MB ပဲရှိပါတယ်...။
ကွန်ပျူတာ System Error များကို ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် .. ဒါတင်မကသေးပဲ...
Blue Screen Error များကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း ,
Registry Cleaner က Registry အကောင်းဆုံး ရှင်းပေးခြင်း ,
PC Optimizer က ကွန်ပျူတာကို မြန်ဆန်စေခြင်း ,
Fix Errors က ကွန်ပျူတာရဲ့ Error တွေကို ပြုပြင်ပေးခြင်း ,
File Extension က PC မှာဖြစ်တတ်တဲ့ Icon တွေ တူနေခြင်းကို ပြုပြင်ပေးခြင်း,
Dll Fix က Dll ဖိုင်လ်တွေ ပျက်စီးတာတွေကို ပြုပြင်ပေးခြင်း ,
Disk Defrag က တစ်စစီ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဖိုင်လ်တွေကို နေရာတကျ ပြန်စီပေးခြင်း,
Dll Download က PC မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Dll ဖိုင်လ်တွေကို အလိုလျောက် ဒေါင်းယူပေးခြင်း,
Windows Updates က PC အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ Update ဖိုင်လ်တွေကို အလွယ်တကူ Update လုပ်ပေးခြင်းတို့ အပြင် တခြား Tool ပေါင်းမြောက်များစွာ ပါဝင်ပါသေးတယ်..။
1 Click နဲ့မို့ အသုံးပြုရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူစေပါတယ်.... ဒိထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိလိုပါက မူရင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် မှာ လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်ခင်မျာ.....:)
For the convenience along with protection, WiseFixer™ even offers the backup mechanism regarding any kind of repaired files for you to easily recover any changes whether required.
What WiseFixer™ Free Download
Instantly Fix ones Computer Errors via automatically diagnosing and also fixingavariety of method errors with intelligent WiseFixer™ error knowledge base.
Dramatically Speed Up your own Computer and olso world wide web coming from fixing just about all queries slowing lower the computer along wit world wide web in addiito fine-tuning ones method setting to be able to maximum performance.
အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျားးး
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/30/2013 07:42:00 am